China in Stock Marathon ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက်အားကစားကြယ်ပွင့်ဒီဇိုင်းလျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သောအမျိုးသားတီရှပ် | RE-HUO
ရှပ်အင်္ကျီ & ထိပ်
Bibs လူကြီးများနှင့် Ki သင်တန်းများ ...
ကလေးဂျာစီ Scrimmage Trai ...
အရွယ်ရောက်သူ - ဆယ်ကျော်သက် Scrimma ...
ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။ အားကစား T-shirt အလျင်အမြန်ခြောက်သွေ့သောအမျိုးသားအပြေးမာရသွန်အတွက်တီရှပ်
ပစ္စည်း 140gsm 100% polyester
နည်းပညာ ဖန်သားပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဆိုးဆေးမြင့်ခြင်း၊ ပန်းထိုးခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။
အသွင်အပြင်: Breathable၊ Plus အရွယ်အစား၊ သက်သောင့်သက်သာရှိသော၊
အရောင်: အဖြူ၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ရေတပ်၊ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာ၊ နီယွန်စိမ်း၊
အရွယ်အစား: XS / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4xL / 5XL
မှတ်ချက် - ၁. အရွယ်အစားအားလုံးသည်တရုတ်နိုင်ငံအရွယ်အစားဖြစ်ပြီးလက်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ၁-၂ စင်တီမီတာအမှားအယွင်းရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောရလျှင်တရုတ်အရွယ်အစားမှာယူအက်စ်သို့မဟုတ်ယူအက်စ်အရွယ်အစားထက်သေးငယ်သည် (တရုတ်အရွယ်အစား XL = ယူရိုအရွယ် S၊ တရုတ်အရွယ်အစား L = ယူရိုအရွယ်အစား XS စသည်ဖြင့်)
ပစ္စည်းမ ၀ ယ်ခင်တိုင်းတာမှုဇယားကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
အရောင် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ သင်လိုအပ်သည့် Pantone အရောင်နံပါတ်ကိုသာသင်လိုအပ်သော်လည်းစိတ်ကြိုက်အရောင်များအတွက်အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက်ရှိသည်။
Logo: မျက်နှာပြင်ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ကူးပြောင်းခြင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပန်း၊ ရွှေနှင့်ငွေပုံနှိပ်ခြင်း၊
နောက်တစ်ခု: မာရသွန်ကြော်ငြာနှင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောတီရှပ်များအတွက်အမြန်ခြောက်သွေ့သော polyester ရှပ်အင်္ကျီများ
Fashion Breathable အားကစား ၀ တ်စုံလက်တိုတို ...
လက္ကား Custom Custom Print Quick Dry Polo ရှပ်အင်္ကျီ
လက်ကားအမျိုးသမီး ၀ တ်စားဆင်ယင်လိုဂိုလိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက် ...
ချည်မျှင်များတည်ဆောက်ခြင်းထုံးစံကြံ့ခိုင်ရေးအင်္ကျီ s ကို ...
မာရသွန်အဘို့အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ polyester ရှပ်အင်္ကျီ ...
Hot Fashion ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများကိုပို့ကုန်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Jiangxi ပြည်နယ်၊ Nanchang City တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုစတုရန်းမီတာ ၈၂၅၀ ရှိပြီးအလုပ်သမား ၃၀၀ ရှိသည်။ Hot Fashion သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအားကစားအဝတ်အစားများတွင်လူသိများသည်။ ယခုအခါ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ယူကေ၊ ဂျပန်၊ ဘရာဇီးနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့သို့စျေးကွက်ကိုအောင်မြင်စွာတည်ထောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Hot Fashion Co.Ltd ။ ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း၊ အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်လည်ပတ်မှုတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Nanchang City တွင်တည်ရှိသောကုမ္ပဏီသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုစတုရန်းမီတာ ၈၂၅၀ ရှိပြီးအလုပ်သမား ၃၀၀ ရှိသည်။